Muudey oo sheegay in la xaday Dastuurka Soomaaliya [Dhageyso]
MUQDISHO, Soomaaliya - Cabdiweli Ibraahim Muudey, gudoomiye ku xigeenka Gollaha Shacabka, ahna ku-simaha Afhayeenka ayaa daboolka ka qaadey in la xaday Dastuurka Soomaaliya.
Muudey ayaa sheegay in Dastuurka qabyo qoraalka ah ee hadda laga shaqeynayo dib u eegistiisa inuusan ahayn midkii hore ee ay ansixyeen Ergada Beelaha Soomaaliyeed.
"Kii hore waa maqan yahay, kii ergada Soomaaliyeed ay ansixisay ma ahan midka aan hadda ku shaqeynayno, hadii loo baahdana waa la heli doonaa dadkii ka dambeeyay arintaasi, indhoole ma nihin caqli la’aanna malihin" ayuu yiri Muudey.
Ku simaha Gudoomiyaha Gollaha Shacabka ayaa sheegay in sababta loo xaday Dastuurkii hore ay yahay inuu ahaa mid dowlado shisheeye ay maalgashadeen, oo uusan ahayn dastuurka Soomaaliya maalgelisay.
"Sababta keentay in loo waayo Dastuurkii saxda ahaa ma garan kartaan? waxaa waaye Dastuur annaga aan maalgashanayno ma ahayn, ee wuxuu ahaa mid dad kale ay maalgelinayaan," ayuu hadalkiisa raaciyay Muudey.
Muudey ayaa ugu baaqay Gudiga Dastuurka Labada Aqal ee Baarlamanka iyo shacabka Soomaaliyeed inay ilaaliyaan dastuurka qabyo qoraalka ah ee hadda yaalla, kaasi oo ay ku shaqeynayso dowladda Federaalka Soomaaliya.
Dastuurka Soomaaliya ayaa noqday kan u qaabilsan caalamka, iyadoo lagu cunay lacag...
Soomaliya 12.05.2018. 15:45